Knowledge Bank: ကျွန်တော်နှင့် (၃၄) ပေ အကျယ် မြေသားလမ်း
ကျွန်တော်နှင့် (၃၄) ပေ အကျယ် မြေသားလမ်း
(၄၀)ပေ အကျယ် မြေသားလမ်း
တစ်ကြောင်းထိုးလမ်းအကြောင်းယခင်အပတ်က တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့တည်ဆောက်ခဲ့သော တစ်ကြောင်းထိုးလမ်းပြီးစီးပါက အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည့်အင်ဂျင်နီယာကြီးများနှင့် အတည်ပြုပါ။ လိုအပ်လျှင် လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ တစ်ကြောင်းထိုးလမ်းအတည်ပြုပြီးပါက (၃၄)ပေ အကျယ်တည်ဆောက်မှာလား ၊ (၄၀)ပေ အကျယ်တည်ဆောက်မှာလားဆိုတာကို လူကြီးထံအတည်ပြုချက်ယူပါ။ ယင်းနောက် အဆိုပါအကျယ်ဖြင့် Geometric Design ထုတ်ပေးပါရန် လမ်းပုံထုတ်/လမ်းဦးစီးသို့ စာတင်ပါ။ (၄၀)ပေ အကျယ်မြေသားလမ်းတွင် Pavement Width (၁၂)ပေ တစ်ဖက်လျှင် Hard Shoulder (၄)ပေ စီနှင့် Earth Shoulder (၁၀)ပေစီဖြစ်ပါသည်။ (၃၄)ပေ အကျယ် မြေသားလမ်းတွင် Earth Shoulder တစ်ဖက် (၇)ပေ စီဖြစ်ပါသည်။ (၄၀)ပေ အကျယ်မြေသားလမ်းကို မြေပြန့်အပိုင်း၌ အသုံးများပါသည်။ တောင်ပေါ်ဒေသအပိုင်း၌ (၃၄)ပေ အကျယ်မြေသားလမ်းကို အသုံးများပါသည်။
ရုံးချုပ်အဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပါမည်။ သူတို့ကလည်းအထက်လူကြီးများထံမှ လမ်းအူကြောင်း Gradient အား Maximum ဘယ်လောက်ထားမှာလဲ 3% ထားမှာလား ၊ 7% ထားမှာလား ၊ 10% ထားမှာလားဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်ယူ၍ လမ်းအားတိုင်းတာကာ Design ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းအူကြောင်း Gradient ကို 3% နှင့် အသုံးပြုသောလမ်းမှာ ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြားပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးများမှာ 7% ၀န်းကျင်ရှိကြပါသည်။ လမ်း Class ကို ခွဲ၍ အရေးမကြီးသောလမ်းများ၌ 7% အထက် အသုံးပြုခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ Gradient နည်းလေလေ လမ်းကောင်းလေလေဖြစ်သော်လည်း အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ပေးဆပ်ရမှုများပါသည်။ လမ်းပုံထုတ်အဖွဲ့မှ ပေးပို့လာသော Data များအတိုင်း Station ဘယ်ဘက်မှာ ဘယ်လောက်ဖြတ် ၊ Station ဘယ်ဘက်မှာ ဘယ်လောက်ဖို့ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဖြတ်မြေများကို စွန့်မပစ်ပဲ ဖို့မြေနေရာများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုရပါမည်။ ဘယ် Station မှာ ဘယ်လောက်ကွေ့ ဘယ်နေရာမှာ P.C ဘယ်နေရာမှာ P.I များ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ လမ်းပုံထုတ်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ မျက်ကွယ်ကုန်းများ Vertical Curve ကျန်နေပါက ထပ်မံဖြတ်၍ ပေးနိုင်ပါသည်။ မျက်ကွယ်ကွေ့များ (Horizontal Curve) များအတွင်းရှိ တောင်ကုန်းများအားလည်း ထပ်မံဖြတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Horizontal Curve အတွင်း အတန်ငယ်နိမ့်သော လျှိုများ ၊ ချောင်းများအား ယာယီမြေကာနံရံ ( သစ်ဆည်များ ၊ ကတ္တရာပုံးမြေကာနံရံများ ) အသုံးပြု၍ မြေဖို့ပေးကာ Horizontal Curve များ ဖြောင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ကြောင်းထိုးလမ်းတွင် လမ်းသားညွှတ်သောနေရာ (Sagging Point) များ အနည်းငယ်ပြေသော လျှိုများအား မြေသားတာဘောင်ဖြတ်ဖို့၍ Culvert များ ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။
လမ်းတာရိုးမြေဖို့ရာတွင် မူလတစ်ကြောင်းထိုးလမ်းမှ အပေါ်ယံမြေလွှာများကို ၆” သို့ ၁’ ထုအထိ ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ ပြီးမှသား ရွေးချယ်မြေသား (Selected Soil) များကို တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာဖို့ပေးရပါသည်။ တစ်လွှာချင်းစီအား ၆” (သို့) ၉” (သို့) ၁၂” စသည့် Layer by Layer ဖြင့် ခင်းကြိတ်ပေးရပါသည် ၊ ရေဖြန်းပေးရပါသည်။ Optimum Moisture Content ရသည်အထိ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ မြေဖြန့်ရာတွင် Dozer များ Grader များ အသုံးပြုပါသည်။ မြေကြိတ်ရန် Sheep Foot ပါသော Compactor များသုံးရပါသည်။ Vibrating Compactor များ သုံးရပါသည်။ မြေပြန့်များတွင် လမ်းတာရိုးအမြင့်အား High Flood Level အထက် (၃)ပေခန့်မြင့်အောင် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။
လမ်းအဖြောင့်များတွင် Camber ဖော်ခြင်း ၊ လမ်းအကွေ့မျာတွင် Super Elevation များ တစ်ခါတည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ မြေသားတာဘောင်တွင် Camber မှာ 5% ရှိပါမည်ဖြစ်ပါည်။ မြေသားတာဘောင်အား အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အနီးအနားတွင်ရရှိနိုင်သော တောင်ကျောက်စရစ် (Hill Gravel) မြစ်ကျောက်စရစ် (River Shingle) ၊ ကန်ကား ၊ ကျောက်ဆွေးမြေ ၊ ဂ၀ံမြေများကို Sub Grade အဖြစ် ၆” တစ်လွှာ (သို့) ၁၂” တစ်လွှာခန့် ဖြန့်ခင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တံတားအ၀င်အထွက်များတွင် အလျား ပေ(၁၀၀) ခန့် အနည်းဆုံးအထိ Gradient 0% ဖြင့် ၀င်ရန်/ထွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တံတား အ၀င်/အထွက် အလျား ပေ(၁၀၀) ခန့် အနည်းဆုံးအထိ Alignment ဖြောင့်ရပါမည်။ Filling အပိုင်းများတွင် တံတားများသည် အနိမ့်ဆုံးအပိုင်း၌ ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တံတား Decking Elevation သည် ကားလမ်း Elevation ထက် နိမ့်ရပါမည်။ ။ ( ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ကော့တစ်ကုန်း မဖြစ်ရပါ )
လမ်းတာရိုးအသုံးပြုမည်ဆိုပါက လိုအပ်သောနေရာများတွင် ကန့်လန့်ဖြတ်ရေမြောင်း ၊ Pipe Culvert ၊ Box Culvert ၊ တံတားငယ်များနှင့် တံတားကြီးများ တည်ဆောက်ရပါမည်။ One Side Cutting အပိုင်းများ၌ Pucca Drain များ တည်ဆောက်ရပါမည်။ Both Side Cutting အပိုင်းများ၌လည်း Pucca Drain များ တည်ဆောက်ရပါမည်။ Cutting အပိုင်းများတွင် ၆၀ ဒီဂရီထက်လျှော့သော Slope များသုံးရပါမည်။ ဖြတ်မြေအမြင့် (၁၅)ပေရှိတိုင်း အကျယ် (၈)ပေရှိသော Step Berm တစ်ခု ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ Filling အပိုင်းများတွင်လည်း Side Slope ကို သတ်မှတ်အချိုးအတိုင်း ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ဖို့မြေ (၁၅)ပေအမြင့်ရှိတိုင်း (၈)ပေ ကျယ်သော Step Berm တစ်ခုထည့်ပေးရပါမည်။ လမ်းအူကြောင်းတစ်လျှောက် ရေမစီးဆင်းစေရန် လိုအပ်သောနေရာများအား Cross Drain များတူး၍ ကျောက်များဖြည့်ပေးရပါမည်။ လမ်းသားပေါ်၌ ရေမစီးဆင်းစေရန် Pavement ထက် လမ်းပုခုံးမမြင့်စေရပါ။ Side Drain ကို လမ်းထက်နိမ့်ရပါမည်။ ကျောတန်းများပေါ်၌ တည်ဆောက်သော (၄၀)ပေ အရှည် လမ်းတာရိုး၏ ဘယ်/ညာနှစ်ဖက်သို့ Cross Drain များ တူးပေးခြင်းဖြင့် Culvert အရေအတွက်များ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောကွေ့များ ၊ Sight distance နည်းသောကွေ့များတွင် Guard Post တိုင်များ ၊ Guard Rail များ ၊ Guard Wall များ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။ လမ်းသားပြိုကျနိုင်သော ၊ လမ်းသားပဲ့ကျနိုင်သော နေရာများတွင် Permanent မြေကာနံရံများ တည်ဆောက်ရပါမည်။
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သောလမ်းများသည် တစ်ကြောင်းထိုးလမ်း ၊ (၄၀)ပေ အကျယ်မြေသားလမ်း တည်ဆောက်ပြီး Sub Base Course, Base Course နှင့် Surface Course များ တဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။ ( ဥပမာ - ရေနံချောင်းမြို့ရှောင်လမ်း ၊ စစ္စနိုး-ရေနံမ-ကျောက်ပုံ-ကန်တုတ်လမ်း ) သို့သော် တစ်ချို့သောလမ်းများမှာ တစ်ကြောင်းထိုးလမ်းပြီးလျှင် Sub Grade, Sub Base အဖြစ် ခွဲကျောက်တစ်လွှာခင်းပြီးမှ (၄၀)ပေ အကျယ် လမ်းတာရိုးတည်ဆောက်သော လမ်းများရှိပါသည်။ ( ဥပမာ။ မင်းလှ - သရက်လမ်း ၊ ထီးလင်း - ဆေးမင်းတော - ရေမျက်နီလမ်း )
တစ်ကြောင်းထိုးလမ်းတည်ဆောက်ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း (၄၀)ပေ အကျယ်လမ်းတာရိုးမဆောင်ရွက်ပဲ ( အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသော ) Sub Grade, Sub Base, Base နှင့် Surface Course ဆောင်ရွက်သောလမ်းများလည်းရှိပါသည်။ ( ဥပမာ - ချောက်-စဉ့်ကူ-ပုဂံလမ်း )
Credit to > U Shwe Zin
နောက်ထပ် အသစ်ရှာတွေ့လာတာနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်တင်ပေးပါတယ်။ ခရမ်းပင်စိုက်ပျိုးနည်း.pdf https://yadi.sk/i/dGEnW9LlkEQ2u စပါးစိုက်ပျိုးနည်း .p...
အရမ်းမှန်တယ် တိုက်ဆိုင်တယ် ဒါပေမဲ့မှန်မှန်ဖြေနော်............. သည်စာကိုဖတ်ပြီး ဆယ်မိနစ်အတွင်းမှာ သူ့ ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ အခုဖော်...
1. ရိုးရိုး ultrasound ကနေ ကလေးရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကို ဘယ်လောက်ထိ သိနိုင်မလဲ။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ စုံမစုံ၊ နှုတ်ခမ်း ကွဲမကွဲ သိရမလား။ သမီးရဲ့ ultras...
ဆေးအမည်က မီးဖိုချောင်သုံး ချင်း(ဂျင်း)နဲ့ ရှောက်သီး နှစ်မျိုးတည်းပါ၊၊ချင်းကို အခြောက်မဟုတ်ဘဲ အစိုယူ ရပါမယ်၊ လက်မတစ်ဆစ်လောက် ချင်းကို အခွံခ...
ဘာသာပြန်စာအုပ်များ (၄၅) အုပ်
(၁)သူသေကိုယ်သေ (မြန်မာပြန်)(တက္ကသိုလ်နေ၀င်း) http://www.mediafire.com/?eehk5bux345f68v (၂)အင်ဖာတိုက်ပွဲ (တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ်) http://www.medi...
'မင်္ဂလာပါ' ဆိုတဲ့ စကားကို မည်သူစတင် တီထွင်ခဲ့သနည်း
'မင်္ဂလာပါ' ဆိုသော နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအား စတင်တီထွင်ခဲ့သူမှာ ဖဆပလ အစိုးရခေတ်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော '...
Honda Civic Hybrid ဆိုသည်မှာ ...
၁၃၀၀စီစီတွေထဲမှာ ဒီဇိုင်းအလှဆုံး၊ modify လုပ်လို့ အကောင်းဆုံး ကားအမျိုးအစားလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Hybrid အမျိုးအစားမို့ ပျက်ခဲ့သည်ရှ...
မဟာဗောဓိရိပ်သာမှာ ဒကာမကြီး တစ်ယောက် အသဲရောဂါ ဖြစ်တာ ဆေးရုံ က ၆လ ခံမယ်ပြောတာ ဆေး တစ်မျိုးနဲ့တည့်ပြီး ခုဆို ခြောက်နှစ်တောင် ကျော်ပြီ ...
“ အင်ဂျင်ဝိုင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ ” အပိုင်း(၁)
အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုရွေးချယ်ရာတွင် အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများမှသတ်မှတ်ထားသော engine performance requirement များ၊ အင်ဂျင်၏ အသုံးပြုမည့် application...
Tissue culture ယူကလစ် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များ
မြန်မာအမည် ယူကလစ် Eucalyptus species Myrtaceae (Family) ပြီးတဲ့နှစ် တုန်းက ယူကလစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို ဒို့တောင်သူဂျာနယ်မ...
ပျိုမေတို့အတွက် အလှအပရေးရာ (1)
ပြည်သူ့ အသံ (1)
မြန်မာစာ မြန်မာစကား (2)
မြန်မာ့ရိုးရာ စားစရာ (4)
မြန်ပြည်တခွင် ခရီးစဉ် (8)
ရသ ကဗျာ (3)
ရာဇ၀င် ဆောင်းပါး (25)
သစ်တော သယံဇာတ (7)
နိုင်ငံ့ သမိုင်း (11)
ကျွန်တော် တတ်သလောက် သိသလောက်လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံးဝေမျှပေးသွားပါမယ်
တောလမ်းရဲ့ ဝဲယာ တဖက်တချက် မြင်မြင်သမျှ မက်မန်းခြံ ...
ကျွန်တော်နှင့် Recorded MB
ကျွန်တော်နှင့်. . . Road Chart
Cervical Cancer links သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ ဖတ်စရာများ
ကျွန်တော်နှင့်Up Stream/Down Stream
ကျွန်တော်နှင့် မြေကာနံရံများ ( Retaining Wall )
Salt ဆားများလွန်းလို့ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးနေရသူပေ...
တရုတ် - မြန်မာ စစ်ပွဲများ ( ၂ )
တရုတ် - မြန်မာ စစ်ပွဲများ ( ၁ )
Double Cutting (or) Both Side Cutting
Medical tests for all women အမျိုးသမီးတိုင်းလိုအပ်...
Russian Trojan horse ထရိုဂျန်မြင်း
Kinwunmingyi U Kaung ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်း
Ectopic Pregnancy Causes သားအိမ်ပြင်ပကိုယ်ဝန် ဘြာေ...
Horinzontal Sight Distance & Vertical Sight Distan...
Side Drain (or) လမ်းဘေးရေမြောင်းများ
ငလျင် လှုပ်ရင် ဘယ်လို ကာကွယ် ရှောင်တိမ်းမလဲ
အသက်သုံးဆယ်အရွယ်မှာ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်အောင် ဒီလိုလ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်လာကြသော ဘင်္ဂါလီမူဆလင်မျာ...
အလွန် Smart ကျပြီး Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမည့် လင်...